Mobilenomics: Raha tsy finday ianao dia tsy marketing
Alatsinainy Martsa 25, 2013 Alatsinainy Martsa 25, 2013 Douglas Karr
Mahatsiaro ho tsara izahay mahita ny fironana teknolojia ho avy ary avy eo mampahafantatra anao mialoha. Izahay dia miresaka momba ny fitomboan'ny finday mandritra ny herintaona mahery izao, saingy gaga izahay raha vao nanao fanaraha-maso fanatsarana ho an'ny mpanjifa vao haingana izahay ary tsy nanana tetikady finday… tsy nisy. Tsy finday ny tranonkalany, tsy nohamarinina ho an'ny finday ny mailaka, ary tsy nisy fampiharana finday teny amin'ny faravodilanitra… nada. Indraindray mila video izany
Niverina i Erik niaraka tamin'ny fizarana farany (faha-4) farany ny horonantsary sary nataony tamina media sosialy. Raha mandinika tsara ianao, ny dikanteny tsirairay avy amin'ny horonan-tsary dia manao asa tsy mampino amin'ny fampisehoana ny fiovana izay nanaparitaka an'izao tontolo izao an'izao tontolo izao. Na ny parodies aza dia mahafinaritra. Ampitahao amin'ny horonantsary Social Revolution Revolution tamin'ny taon-dasa ary hahita statistika betsaka kokoa mifandraika amin'ny fifandraisana tena izy eo amin'ny vola eo amin'ny marika sy ny mpanjifa ianao. Erik Qualman dia
Nandefa ny andian-dahatsoratry ny horonantsary momba ny revolisiona media sosialy miorina amin'ny Socialnomics an'i Erik Qualman izahay. Mahay izy ireo ary feno antontan'isa manaitra amin'ny fomba fanovan'ny media sosialy ny fomba fiainantsika, ny fiaraha-miasa ary ny fifandraisantsika amin'ny tsirairay. Mampihomehy loatra ity parody ity raha tsy hizara. Nilaza ny olona fa rehefa mikasika ny marina ianao… dia amin'izay vao tena mampihomehy ny raharaha. Heveriko fa ity video ity ihany! Fiovan'ny haino aman-jery sosialy - The Parody
Eto aho dia mipetraka amin'ny efitrano fandraisam-bahiny any Milwaukee, Wisconsin. Ny ekipanay dia manolotra orinasa iray eto rahampitso ary hiverina any Indianapolis. Nividy akanjo vaovao aho tamin'ilay dia - amidy amina 70% eo ho eo io ary tsy zakako. Volontany sôkôla - saika mainty - ary mahazo aina. Tsy nividy palitao aho tao anatin'ny taona vitsivitsy lasa izay, dia nitandrina tsara ny tenako aho